July 2021 – " कञ्चनजंगा News "
No Comments on विदेश जान खोप लाउन खोज्दै हुनुहुन्छ? अब जानुस् यि दुई अस्पताल
काठमाण्डौ – विदेश जाने श्रमिक वा विद्यार्थीहरुको लागि कोरोना विरुद्धकाे खोप लगाउन दुई वटा अस्पताल तोकिएका छन् । अब विदेश जानेहरुले काठमाण्डौमा रहेको नेपाल प्रहरी अस्पताल र सैनिक अस्पतालमा गएर खोप लगाउन सकिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । खोप लगाउन जाँदा पासपोर्ट र भिसा अनिवार्य साथमा लिएर जानुपर्नेछ ।
पछिल्लो समय देशव्यापी खोप अभियान रोकिएकाले विदेश जानेहरुकै लागि भनेर मन्त्रालयले यी दुई अस्पताल तोकेको हो । खोप अभियान चलेको बेला आफू नजिक रहेका खोप केन्द्रमा गएर खोप लगाउन सकिन्थ्यो!
यो पनि पढ्नुहोस्: कतार प्रवेश गर्नेलाई नयाँ नियम
काठमाडौं : कतारले आफ्नो मुलुक प्रवेश गर्ने विदशीले मान्यता प्राप्त खोपको मात्रा पूरा गरेको भए क्वारेन्टिन बस्नु नपर्ने निर्णय गरेको छ । कतारमा संक्रमितहरुको संख्या उल्लेख्य रुपमा घटेपछि क्वारेन्टिनको शर्त केही खुकुलो पारिएको हो । कतारस्थित नेपाली दूतावासले कतार सरकारको नयाँ नियम उल्लेख गर्दै खोप लगाएको कम्तीमा १४ दिनपछि प्रवेश गरेमा क्वारेन्टिनमा बस्नु नपर्ने बताएको छ । कतारले फाइजर, बायोन्टेक, मोर्डेना, अष्ट्राजेनिका (कोभिशिल्ड÷अक्सफोर्ड) र जोन्सन एण्ड जोन्सनको खोपलाई मात्र कतारमा मान्यता दिइएको छ । दूतावासका अनुसार मान्यता प्राप्त खोप लगाएका व्यक्तिको साथमा खोप लगाएको प्रमाणपत्र अनिवार्यरुपमा साथमा राख्नु पर्नेछ ।
प्रमाणपत्रमा खोप लगाइएको मिति, खोपको नाम÷प्रकार, उपलब्ध भएमा खोपको लट नम्बर र खोप लगाउने कार्यालयको छाप हुनुपर्ने छ । सिनोफर्म खोप लगाएका व्यक्तिको भने शरीरमा कोरोना प्रतिरोधी एण्टिबडी भए÷नभएको परीक्षण गरिने बताइएको छ । कतार प्रवेश गर्नु ७२ घण्टाअघि गरिएको कोरोना भाइरसको पीसीआर परीक्षणको नेगेटिभ रिर्पोट हुनुपर्ने यसअघिको अनिवार्य नियम भने यथावत रहेको छ । कोभिड संक्रमण भई निको भएको १२ महिनाभित्र कतार पुनः प्रवेश गर्ने यात्रुले क्वारेन्टिन बस्नु नपर्ने नयाँ व्यवस्थामा उल्लेख छ ।
नेपाली दूतावासले खोपको मात्रा पूरा नगरेका, खोपको मात्रा लगाएको १४ दिन पूरा नभएको वा खोप नलगाएका यात्रुले भने अनिवार्य ‘डिस्कोभर कतार’ वेबसाइटमा बुकिङ गरी १० दिन होटेल क्वारेन्टिन वा १४ दिन मेखाइनिस क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने जनाएको छ । त्यस्तै दूतावासले कतार प्रवेश गर्नुभन्दा कम्तिमा १२ घण्टा अगाडि अनलाइनमार्फत प्रि–रजिस्ट्रेशन गरी तोकिएका कागजात अपलोड गरेपछि प्राप्त हुने ट्राभल परमिटसमेत साथमा बोक्नुपर्ने बताएको छ ।
कतारले आइतबारसम्म खोप लगाउन योग्य वर्गमा रहेका ७९.१ प्रतिशतले खोप लगाइसकेको बताएको छ । कतारको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार कतारमा १६ वर्षभन्दा माथि उमेरको जनसंख्या ६७ प्रतिशत रहेको छ । ६० वर्ष भन्दा बढी उमेरका ९८.६ प्रतिशतले कम्तीमा एक डोज खोप र ९३.५ प्रतिशतले दुवै डोज खोप लगाइसकेको भन्दै कतारले नयाँ संक्रमितहरुको संख्या उल्लेख्यरुपमा घटेको बताएको छ । उज्यालो न्युज नेेपाल डटकम बाट
कक्षा १२ मा ६० प्रतिशत ल्याएका विद्यार्थीलाई भारतीय विश्वविद्यालयमा छात्रवृत्तिसहित साजीलै अध्ययन गर्ने अवसर
No Comments on कक्षा १२ मा ६० प्रतिशत ल्याएका विद्यार्थीलाई भारतीय विश्वविद्यालयमा छात्रवृत्तिसहित साजीलै अध्ययन गर्ने अवसर
उनका अनुसार कम्पेक्स स्कलरशिपका लागि अगस्ट चौथो साता कम्प्युटर बेसमा परीक्षा लिइने भएको छ । कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेका र परीक्षा दिएका दुवै वर्गका विद्यार्थीले यो छात्रवृत्तिका लागि आवेदन तथा परीक्षा दिन सक्ने भारतीय दूतावासद्वारा निष्कासित छात्रवृत्ति फारम भर्ने तरिकामा उल्लेख छ । यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।
हाल शैक्षिक सत्र २०२१–२२ का लागि भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउने समयमा संस्थाले ‘स्कलरसिप इन इन्डियन युनिभर्सिटिज’बारे जानकारी एवं परामर्श दिने कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । भारतीय दूतावास काठमाडौंले मेधावी र मेहनती नेपाली विद्यार्थीलाई मेरिटको आधारमा ‘कम्पेक्स स्कलरशिप २०२१’ मार्फत शतप्रतिशत छात्रवृत्तिमा भारतका उत्कृष्ट विश्वविद्यालय र कलेजमा अध्ययनको अवसर प्रदान गरेको छ ।
No Comments on आफ्नै २ भतीजहरुले मनकलालाइ….
रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिका ४, की मनकला खत्री खड्कालाई आफ्नै जेठाजुका छोरा (भतीजहरु)ले ह’ ‘त्या गरेको खुलेको छ। साउन ११ गते सोमबार २६ वर्षीया खड्काको घटनामा भतीजहरुको नै हात रहेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ । घर नजिकै गोठमा रहेका भैंसीलाई घाँस हाल्न गएकी खड्काको ह’ ‘त्या भएको अवस्थामा उनको शव भेटियो । त्यसको २ दिनपछि अ’परा’धी पत्ता लागेका छन् । प्रहरीले मुसिकोटमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी घटनाबारे सार्वजनिक गरेको हो ।
मृतक खड्काकै सहोदर भतीजा जेठाजुका दुई नाबालक छोराले उनको ह’ ‘त्या भएको खुलेको पत्रकार सम्मेलनमा जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक ध्रुवकुमार श्रेष्ठले बताए । १५ र ११ वर्षका दुई सहोदर दाजु-भाइ मिलेर मनकलाको ह’ ‘त्या गरेको डिएसपी श्रेष्ठले बताए ।
नाबालक भएकाले प्रहरीले उनीहरुको नाम भने सार्वजनिक गरेको छैन । मृतकले घाँ’ ‘टी, नाक, कानमा लगाएको गरगहना समेत ती दाजुभाइले घरमा राखेको भेटिएको डिएसपी श्रेष्ठले बताए । मृतकको शरीरबाट हराएका सबै गरगहना, एउटा खु’ ‘र्पा, उनीहरुले घटनाका बेला लगाएका कपडा पनि प्रहरीले फेला पारेको छ ।
उनीहरुले ह’ ‘त्या गरेको स्वीकारेपछि प्रहरीले उनीहरुलाई फेरि घटनास्थल लिएर आवश्यक प्रमाण संकलन गरेको थियो । प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट दाजुभाइको सं’लग्न’ता देखिएको र बाँकी अनुसन्धान भने भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । पुरानो रिसिवी र परम्परागत मान्यताका कारण घटना भएको निष्कर्ष प्रहरीको छ ।
केही समयअघि मृतक खड्काले १५ वर्षीय ती भतीजलाई १५ हजार नगद चोरी गरेको आ’रोप लगाएपछि रिसिबी साँ’ध्न घटना भएको प्रहरीको भनाइ छ । घटना भएको दिन मृतकले दाजुभाइले का’ ‘टेको घाँस नाघेपछि रि’सको आवेगमा अन्टीलाई खु’ ‘र्पा हा’ ‘नेको स्वीकार गरेको डिएसपी श्रेष्ठले बताए ।
मनकलाको ह’ ‘त्या भएपछि ती दाजुभाइ मृतकको कोठामा गएर बाकस समेत खोलेको पुष्टि भएको डिएसपी श्रेष्ठले बताए । प्रहरीले सुरुमा तीन बाबु छोरालाई सोधपुछका लागि ल्याएको थियो । बाँकी अनुसन्धान हुँदै जाने भनेर दुई दाजुभाइले ह’ ‘त्या गरेको विवरण प्रहरीले पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेको हो ।
घटना अनुसन्धानका लागि प्रहरी तालिमप्राप्त कुकुर झिकाएको थियो । त्यस्तै प्रहरीको कर्णाली प्रदेश कार्यालयबाट अनुसन्धन ब्युरो टोली आएको थियो । मृतकका श्रीमान बैदेशिक रोजगारको शिलशिलामा देश बाहिर छन् । उनका सात वर्षका छोरा र सासू घरमा छन् । अन्नपूर्ण पोष्टमा यो खबर छ ।
संक्रमित संख्या बढ्दै गएपछि अस्पतालका आईसीयू र भेन्टिलेटर फेरि भरिन थाले
No Comments on संक्रमित संख्या बढ्दै गएपछि अस्पतालका आईसीयू र भेन्टिलेटर फेरि भरिन थाले
काठमाडौं । संक्रमित संख्या बढ्दै गएपछि अस्पतालका आईसीयू र भेन्टिलेटर फेरि भरिन थालेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका अस्पतालमा अहिले १ सय ६० भेन्टिलेटर र ६ सय ३६ जना आईसीयूमा छन् ।
खोप छ तर लगाउन मान्दैनन् अमेरिकीहरू, कारण यस्तो छ
No Comments on खोप छ तर लगाउन मान्दैनन् अमेरिकीहरू, कारण यस्तो छ
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले बिहीबार देशका स्थानीय सरकारलाई खोप लगाउन आउनेहरूलाई पैसा दिन भनेका छन्। अमेरिकामा पछिल्लो समय भाइरसको डेल्टा भेरियन्टको संक्रमण फैलिइरहेको छ। संक्रमित भएर अस्पताल भर्ना हुनेमध्ये ९० प्रतिशत बढी खोप नलगाएकाहरू छन्।
बिहीवार ह्वाइट हाउसबाट सम्बोधन गर्दै बाइडनले यस्तो आह्वान गरेका हुन्। अमेरिकामा कोरोना संक्रमण बढिरहेको र खोप लगाउने दरमा कमी आएपछि राष्ट्रपति बाइडेनले यस्तो घोषणा गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।
राज्यहरूले अमेरिका रेस्क्यु प्लान अन्तर्गतको कोषबाट प्रयोग गर्न सक्ने गरी खोप लगाउने नागरिकलाई सहयोग रकम उपलव्ध गराउन सक्नेछन्। पछिल्लो मसय अमेरिकामा डेल्टा भेरियन्टको संक्रमण तीव्र रुपमा फैलिएको छ।
समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार अहिलेसम्म १६ करोड ३८ लाख मानिसहरूले मात्र खोप लगाएका छन्। अमेरिकाको जनसंख्या झन्डै ३३ करोड छ। राष्ट्रपति बाइडेनले खोप लगाउने/नलगाउने कुरा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भए पनि खोप लगाउनु आफन्त र देशका निम्ति जिम्मेवारी भएको बताएका छन्।
बाइडेनले सरकारका कर्मचारीका लागि पनि नयाँ कडा खोपसम्बन्धी निर्देशन जारी गरेका छन्। अमेरिकामा सङ्घीय सरकार सबैभन्दा ठूलो रोजगारदाता हो।
सङ्घीय सरकारका निकायहरूमा करिब २० लाख मानिसहरू काम गर्छन्।
बाइडनले जारी गरेको निर्देशन अनुसार अब कर्मचारीहरूले खोप लगाएको प्रमाण देखाउनु पर्नेछ वा अनिवार्य परीक्षणको सामना र मास्क लगाउन तयार हुनुपर्नेछ। हालसम्म अमेरिकामा आधा जनसङ्ख्याले मात्र कोरोनाको खोपको पूरा मात्रा लगाएका बिबिसीले जनाएको छ।
औषधिय गुण, यसरी खानुहोस घरमै बनाएर कयौं रोगबाट छुट्कारा मिल्नेछ
No Comments on औषधिय गुण, यसरी खानुहोस घरमै बनाएर कयौं रोगबाट छुट्कारा मिल्नेछ
अभुमका हर्बल प्रा लि अहमदाबादका डाइरेक्टर डा दीपक आचार्य यहि झारको औषधिय गुणको बारेमा बिगत १५ बर्षदेखि भारतको बिभिन्न क्षेत्रमा रहेर अध्ययन गरिरहेका छन् । भारतको सुदूर आदिवासी अंचल जस्तै पातालकोट (मध्यप्रदेश), डांग (गुजरात) र अरावली (राजस्थान)का आदिवासिहरुले कसरि परम्परागत रुपबाट यसलाई औषधिको रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् र र यसले कसरि काम गर्छ भन्ने उनले अध्ययन गरेका छन् र यसलाई प्रमाणित गर्दैछन् ।
गन्दे नामक झारको झोलले काटेको ठाउँमा बगेको रगतलाई तुरुन्तै निको बनाए जस्तै लाजवन्ति झारले पनि काटेको घाउलाई निको बनाउँछ। यति मात्रै होइन यो झार बहु उपयोगि छ। यो झारको जराको दुइ ग्राम चूर्ण दिनमा तीन पटक मनतातो पानीसंग खानाले बाबाशिर वा अन्य कारणबाट हुने आन्तरिक घाउ छिट्टै निको हुने आचार्य बताउछन् ।
No Comments on यस्ता सपना देख्ने व्यक्ति बन्छन् भविष्यमा धेरै धनी, तपाईले पनि देख्नुभयो की ?
हामीले राति सुतेको समयमा विभिन्न किसिमका सपनाहरु देख्ने गर्दछौँ। यस्ता सपना कोही शुभ हुने गर्दछन् भने कोही अशुभ मानिने गर्दछन्।
स्वप्न शास्त्रका अनुसार शुभ सपना यस्ता हुने गर्दछन्, जुन सपनाका कारण मानिसको भाग्य चम्किने गर्दछ। आउनुहोस् जानौँ यस्ता केही सपनाः
यदी सपनामा कुनै देवी देवताको दर्शन पाइन्छ भने त्यस्ता व्यक्ति भविष्यमा धनी हुने गर्दछन्। सपनामा भगवान देख्नु तपाईको जीवनमा सुख, समृद्धि र धन लाभ प्राप्त हुनु हो।
यदी तपाईले अध्यारोमा कुनै कुनामा बलिरहेको दिप देख्नुभयो भने सम्झनुहोस् माता लक्ष्मीको कृपा तपाईमा परेको छ। सपनामा आफैलाई औँठी लगाएको तथा कुनै मन्दिरको दर्शन गरेको देख्नुभयो भने तपाईलाई अतिरिक्त रकम मिल्ने संकेत हो।
सपनामा तपाईले घरमा मुसाको भागदौड भइरहेको सपना देख्नुभयो भने यो तपाईको धनी बन्ने संकेत हो। सपनामा यदी तपाईले आफू कुनै रुखमा चढिरहेको सपना देख्नुभयो भयो तपाइलाई अचानक धन प्राप्त हुन सक्छ।
यदी तपाईले सपनामा कुनै महिना नाचिरहेको देख्नुभयो भने भविष्यमा तपाई आमिर बन्ने संकेत हो।
No Comments on काठमाडौंवासीका लागि खुसीको खबर, सरकारले जारि गर्यो सूचना
महामारी विरुद्धको पहिलो खोप लगाउन छुटेका ५० वर्षमाथिका नागरिकका लागि काठमाडौं महानगरपालिकामा आजदेखि पुनः भेरोसेल खोप लगाउन शुरु गरिएकोे छ । खोप कार्यक्रम चार दिनसम्म सञ्चालन गरिने छ ।
No Comments on आज साउन १५ खिर खाएर मनाइँदै
महामारी चलेका बेला दूधबाट बनेको खिरले मानव शरीरमा रोग प्रतिरोधी क्षमता विकास गर्ने राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले जनाएको छ । बोर्डको गत वर्ष फागुन १५ गते बसेको बैठकले साउन १५ लाई खिर खाने दिन अर्थात् खिर दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो ।